VOLA FOREX: IZAO NO Fotoana hampiasana INVESTA. - FOREXFUNDS.COM
Mpanolotsaina momba ny varotra Forex
Tari-dàlana hividianana vola sy famatsiam-bola ho an'ny FOREX
VOLA FOREX: IZAO NO Fotoana hampiasana INVESTA.
Izao no fotoana mety indrindra hampiasana vola amin'ny Forex Funds. Satria tena be ny tsena correlated, tsy dia nisy fanakianana na fanamby natao hananganana portfolio fampiasam-bola isan-karazany. Ny fampiasam-bola amin'ny famatsiam-bola Forex tantana tsara na kaonty fitantanana vola dia mety hanonitra ny fihetsika ratsy eo amin'ny tsenam-bola sy fananana fifamatorana. Ary koa, ny vokatra Forex tantana dia afaka manome vokatra be rehefa mihena ny tsena hafa volatility vanim-potoana. Na dia mety hitera-doza aza ny tsy fetezana, dia mety hanokatra valisoa lehibe koa izy io.
NAHOANA NY VOLA FOREX? FANTATRAO INDRAY NY FOMBA HANAVALANA NY TENAKO
Vola Forex tantana sehatra varotra kaonty.
Toy ny a portfolio-karazany maro karazana dia ahitana fananana, paikady, kilasy fananana ary karazana fampiasam-bola sy fitaovana samihafa, toy izany koa ny portfolio Foreign Exchange.
Ireo mpivarotra manana portfolio vola Forex manan-danja dia mety manana kaonty marobe, miaraka amina rafitra maro karazana araka ny voalaza tetsy ambony, ankoatry ny varotra samirery sy mihazakazaka robot na famantarana mandeha ho azy samirery.
Ny kaonty Forex tantanana amin'ny ankapobeny dia midika fa mamela ny mpitantana vola ny mpivarotra vola hivarotra ny kaonty Forex an'ny mpampiasa vola, mitazona amin'ny anaran'ny mpampiasa vola ary aleo amin'ny brokerage mifehy. Ny fahazoan-dàlana dia omena alalana amin'ny mpisolovava voafetra (POA), izay mamela ny varotra (fa tsy ny fisintomana na ny fametrahana) ataon'ny mpitantana vola mandra-panafoanana izany fanomezan-dàlana izany na hampiala vola ny mpampiasa vola.
Ireo mpamatsy vola dia maniry mafy ny tsy fiovan'ny fahombiazany. Ny fahombiazana azo vinavinaina no toetra manandanja indrindra amin'ny firaketana ny lisitry ny mpitantana vola Forex. Eritrereto hoe mivaona amin'ny zava-bita ara-tantara ny firaketana ny lisitry ny mpivarotra vola. Amin'izay dia mety hanahy ny mpampiasa vola fa niova ny fomba fiasan'ny mpivarotra na tsy miasa intsony, izay mety hanosika ny mpampiasa vola hanavotra ny volany na ampahany. Ireo mpampiasa vola Forex efa za-draharaha dia mahatakatra fa ny rakitsoratra lava miaraka amin'ny fiverenana tsy miova mandritra ny taona maro dia tsy antoka amin'ny valiny maharitra sy mahasoa amin'ny ho avy; vokatr'izany dia tsy maintsy manaraka ny zava-bitan'ny mpivarotra hatrany ny mpampiasa vola ary mampitaha izany amin'ny valiny ara-tantara. Ny fandinihana ny zava-bitan'ny tantara mifanohitra amin'ny fiverenan'ny fotoana dia tokony ho ampahany amin'ny mpampiasa vola ankapobeny fahazotoana manadihady dingana.
Mora kokoa ny mandray fanapahan-kevitra sarotra
Betsaka ny anton-javatra mampiavaka azy, na ny habetsahana na ny kalitao, izay mety ho an'ny mpampiasa vola manadihady izay mety manokatra kaonty tantanan'ny Forex na mampiasa vola amin'ny hedge fund izay mivarotra vola.
Afaka miovaova ny mpampiasa vola amin'ny alàlan'ny famoronana portfolio Forex lehibe kokoa na famolavolana portfolio misy fananan-karena maro izay hamatsy vola ny Forex dana ho iray amin'ireo fampirantiana ny Foreign Exchange an'ny mpampiasa vola. Forex tantanina dia tsy tokony ho mpanelanelana amin'ny fananan'ny mpampiasa vola iray manontolo. Tokony ho marina izany na eo aza ny vola dolara na ny vola ao amin'ny Assets Under Management (AUM). Raha tokony ho izy dia tokony haneho isan-jaton'ny fananana natolotry ny mpampiasa vola hivadika izany raha mandinika ny mety ho tombony / risika mety hitranga.
FANOKAFANA NY KAonty ARY FAMPIANARANA NY VOLA FOREX. INONA NY MANARAKA? INONA NO TOKONY HANTENAKO AMIN'NY FANOMPOANA?
Ny ankabeazan'ny broker Forex an-tserasera tarihan'ny teknolojia miasa amin'ny faritra voafetra dia manome sehatra sy serivisy any amin'ny birao miverina ho an'ny mpitantana vola FX matihanina sy ny mpanjifany. Na izany aza, tsy ny volan'ny vola rehetra dia misy amin'ny mpaninjara rehetra. Ity misy ohatra hypothètical: ny Forex Forex Fund dia mety mamafa ny varotra amin'ny alàlan'ny Big Forex Broker, fa tsy amin'ny alàlan'ny Best Forex Broker; Vokatr'izany, ny mpanjifa maniry hanangana kaonty miaraka amin'ny ABC Forex Fund dia tsy maintsy manokatra kaonty amin'ny Big Forex Broker hahazoana ny mpitantana ny vola.
Vantany vao voafidy ny broker Forex dia hosokafana ary hamatsy vola ny kaonty. Manaraka, ny antontan-taratasy famoahana hojerena sy hosoniavin'ny mpampiasa vola. Ny fahefan'ny mpisolovava voafetra (LPOA) dia mila soniavin'ny mpampiasa vola mba hanomezana alalana ny mpitantana varotra Forex hivarotra ny kaonty. Ny mpampiasa vola dia tokony hanana fidirana amin'ny fanambarana tombony sy fatiantoka amin'ny fotoana tena ary ny tatitra rehetra amin'ny andro farany.
Manaraka ny Tahiry Forex aorian'ny fanaovana ny fampiasam-bola.
The faravodilanitra famatsiam-bola ho an'ny vola dia mety misy tanjona kendrena isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, na isan-taona. Arak'izany, ny zava-bitan'ny vola dia tokony hojerena tsindraindray mba hahitana raha mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpamatsy vola ny fahombiazany. Ity dia mekanika fanehoan-kevitra mitsikera ho an'ny mpampiasa vola hilaza raha mifanaraka amin'ny andrasana voalohany ny fampiasam-bola.
Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny zava-misy marina na tsia ny zava-bitan'ny vola dia tokony hifandray amin'ny mpitantana ny vola ny manambola mba hanontany hoe maninona no nisy fiovana teo amin'ny fampisehoana. Ny antony mety mahatonga ny fiverenana ara-tantara tsy hifanaraka amin'ny fiverenana ankehitriny dia ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny hetsika geopolitika tsy ampoizina. Raha tsy nahafa-po ny mpampiasa vola ny fanazavan'ilay mpitantana vola momba ny zava-bita, dia tokony hieritreritra ny hampihena ny fampiasam-bolany ny mpampiasa vola na hisintona azy tanteraka amin'ny volan'ny Forex.
Famatsiam-bola sy kaonty Forex tantanina: Paikady famatsiam-bola famoronana
Mamela ny famatsiam-bola… [Hamaky bebe kokoa...]
Copyright © 2021 · Prose on Framework Genesis · WordPress · Hiditra
Mampiasa mofomamy mba ho azo antoka fa hanome ny tsara indrindra ianao traikefa eo amin'ny tranonkala. Raha manohy mampiasa ity Ndao isika dia mieritreritra fa faly ianao izany.EkeoPolitika fiarovana fiainan'olona